IZIBONELELO EZI-5 EZINGALINDELEKANGA ZOKUTYA ISIDLO SAKUSASA ESIKHULU - IMPILO
Ukufumana Iinjongo Unxibelelwano Impilo Ukuhlala Uzimisele Ukukhula Komntu Imali Uqeqesho Lokuzilolonga Ubomi Obunokubakho Indlela Emfutshane Yetekhnoloji Ulonwabo Ekhaya Unxibelelwano Lonwabo Sebenza Indlela Yokuphila Iteknoloji I-Smartcut Imveliso Ukufunda Unxibelelwano Ngolonwabo Umkhwa Iprobiotic Intsingiselo Yobomi Ubudlelwane Ios Impumelelo Yengqondo Ukucinga Ngendlela Eyakhayo Impumelelo Kwikhondo Lomsebenzi Ixesha Lokulawulwa Kwemveliso Yesihloko Amandla Engqondo Uyilo Ukucinga Ngaphambi Kokuba Usebenze Kuchaphulo Olu Ukufaneleka 2 Ukutya Kunye Nesondlo Izifo Eziqhelekileyo Inkuthazo Ingqalelo Ukwenzakala Kunye Nokubuyiselwa Kwimeko Yesiqhelo Itekhnoloji Yeapp Umsebenzi Woosomashishini Iyavela Ukuba Ngumzali Impilo Yengqondo Amandla Engqondo Ukuqonda Ngokwakho Ukutya Neziselo Uluhlu Olukhulu Loyilo Loyilo Uyilo Imveliso Yobunkokeli Umthambo 2 Ibhalansi Yobomi Ubuhle Ubugcisa Isayikholoji Kofu Uphononongo Lweapp Imfundo Yabantwana Ingqondo Oyile Yentlanzi Ingqondo Buyisela Amandla Ukuphumla Kokulala Ngqamnqa Umsebenzi Weengcebiso Ngamakhondo 30 Into Unxibelelwano Lolwimi Itekhnoloji Ye-Smartphone 2 Indlela Yokuphila Oyithandayo Ubomi Diy Imac Isilwanyana Sentlalo Abahlobo Imvelisogadget Impilo Yomntwana Umsebenzi Wohlahlo Lwabiwo-Mali Usapho 20 Into Abantu Kubudlelwane Inkcubeko Usana Olusandul 'ukuzalwa Umsebenzi Ozisebenzelayo 2 Iincwadi Ukuthengisa Ukuba Ngumzali 2 Ukhuselo Lokusingqongileyo 2 Umthendeleko Ukuba Ngumzali 2 Uluntu 2 Ukuziphatha Komntwana Inzululwazi Imisebenzi Yosapho Ukukhula Komntwana Imbonakalo Ukhuselo Lokusingqongileyo Ukukhulelwa Njengomzali 2 Ipodcast Indlela Yokuphila Yezilwanyana Amandla Omzimba Umthetho Wabucala
Izibonelelo ezi-5 ezingalindelekanga zokutya isidlo sakusasa esikhulu
Sonke siphila ubomi obuxakekileyo. Uninzi lwethu lutsibela isidlo sakusasa ngenxa yokufumana ubuthongo obongezelelekileyo okanye ukuya eofisini imizuzu embalwa kwangoko. Ngokwenza njalo, uyawonakalisa umzimba wakho ngeendlela ezahlukeneyo. Ukutsiba isidlo sakusasa kungakhokelela kwiingxaki ezahlukeneyo ezibandakanya ubunzima bakho kunye nempilo, kunye nokukwazi kwakho ukugxila imini yonke. Ukuxela kwangaphambili ukutya okusempilweni ekuqaleni kosuku lwakho nako kuchaphazela imeko yakho iyonke, enokuthi ikhokelele kuxinzelelo olungafanelekanga kunye nokusebenza kakubi emsebenzini nakwezinye iinkalo zobomi.
Ukwazi oku kulandelayo, kuya kuba nzima ukukhanyela ukuba isidlo sakusasa sisidlo esibalulekileyo esingafanele kutsiwa. Nazi ezinye izibonelelo oza kuzifumana kwisidlo sakusasa esimnandi.Intengiso
1. Uya kunyusa imetabolism
Xa uvukile, kunqabile ukuba uhambe iiyure eziyi-8 ungatyanga. Ewe, xa ulele, uya kulo lonke elo xesha ungakhange utye nantoni na (ngaphandle kwesigcawu, ngokwelo bali lasezidolophini). Ngeli xesha, imetabolism yomzimba wakho iyacotha, kuphela ukukhaba emva xa uvuka kusasa. Ufuna ukusebenzisa eli thuba ngokutya isidlo sakusasa esisempilweni umzimba wakho oza kuba nakho ukuwenza ngokwendalo. Ukwenza njalo kuya kulawula imetabolism yakho, kwaye kugcine ubunzima bomzimba wakho buzinzile.
2. Uya kuzinzisa ubunzima bakho
Ewe, nge-BMI engagungqiyo, ubunzima bakho buya kuhlala bunokulinganisela. Ukutya isidlo sakusasa okunempilo sisicwangciso sokukunceda ukunciphisa umzimba, ngokunjalo. Ngenxa yokuba awuzukulamba ngokupheleleyo kufika ixesha lesidlo sasemini, awuzukutya kakhulu kwaye uzonwabise ngeelekese ezongezelelekileyo kunye nokutya okungenamsoco. Ukuxela isidlo sakusasa esimiselweyo kuya kubangela ukuba unqwenelele ukutya okulula okutyayo imini yonke. Ukuba ii-donuts ezineswekile kukuphela kokutya okufumanekayo, uyakulingeka ukuba uzonwabise rhoqo.Intengiso
3. Uya kugcina ukutya okunempilo
Ngokuqinisekileyo kukho ukutya kwasekuseni okungekho mpilweni ncam, ke ukuba uthatha isigqibo sokutya isidlo sakusasa yonke imihla, qiniseka ukuba usenza ukhetho olunesondlo. Xa ndicinga ngesidlo sakusasa esisempilweni, ndicinga ngesiriyeli (kunye nobisi, kunjalo), amaqanda, kunye neziqhamo. Zonke ezi zinto zokutya zineevithamini kunye neeminerals ezahlukeneyo ezisempilweni kuzo ezinokukunceda uhlale womelele imini yonke. Igama elinye leengcebiso: ukuba ukhetha ukutya isitya esikhawulezayo sokutya kwasekuseni, tsiba ICocoa iyakhukhumeza kwaye Umtsalane weLucky . Unokutya ibhokisi yonke yedonuts endaweni yoko.
4. Uya kuba nolumko ngakumbi, noxinzelelo oluphuculweyo
Xa sasingabantwana, ootitshala bethu babesoloko besicebisa ukuba sitye isidlo sakusasa esinempilo ngosuku lovavanyo olukhulu. Babesazi ukuba kuya kusinceda sihlale sigxile ngalo lonke ixesha siza kuhlala kwiidesika zethu. Ukutya yeyona nto inika amandla umzimba, ke iyavakala into yokuba ubuchopho bethu buya kuphaphama kwaye busebenze ukuba siyakhuthazeka. Njengoko kushiwo ngaphambili, mhlawumbi uhamba ixesha elide ngaphandle kokutya ngexesha lokulala. Xa uvuka, kuyakufuneka utye ukuzinzisa iswekile yegazi lakho. Ukukutyeshela ukwenza njalo kuya kubangela ukozela kunye nokozela. Iivithamini, iiminerali, kunye neeasidi ezinamafutha ezifumaneka kukutya kwasekuseni okunempilo zikwabonakalisile ukuphucula ukusebenza kwengqondo. Musa ukutsiba isidlo sangokuhlwa ukuba ufuna ukuqala ngentloko kuwo wonke umsebenzi ofanele ukuwenza ngalo lonke usuku lwakho.Intengiso
5. Uya kwandisa imo yakho
Sivile sonke Snickers isiqubulo: Awunguwe xa ulambile. Yinyani. Zonke ezinye izibonelelo zempilo zokutya isidlo sakusasa yonke imihla zongeza ukwanda kwempilo-ntle yomntu. Ukugcina ubunzima obukhethiweyo ngokuqinisekileyo kuya kwenza kube lula ukuhamba malunga nosuku lwakho. Kuba awulambi nge-10: 00 AM, uya kuba nakho ukwenza umsebenzi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Kwaye, njengalezo Snickers iintengiso zithi, abantu ngokubanzi abanakucaphuka xa benesisu esigcwele ukutya okusempilweni. Kunokuba nzima ekuqaleni, kodwa qalisa ukuvuka kwimizuzu elishumi ngaphambili, kwaye uqale usuku lwakho ulungile. Umzimba wakho, kunye noogxa bakho, bayakuxabisa.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: IFlickrr ngefama4.staticflickr.com Intengiso
Digital Revolution - Umthombo Wolwazi Olusebenzayo Nolungelelwaniso Oluzinikele Kwimpilo Ephuculweyo, Ulonwabo, Imveliso, Ubudlelwane Kunye Nezinye Izinto Ezininzi.
Ngaba i-jk irola ibhiliyoni
Eyona app ye-ebook yokufunda i-android
Ukuzivocavoca isicwangciso sabaqalayo
indlela yokucamngca ngabaqalayo
izihloko zobudlelwane kwingxoxo yeqela
Izinto ezi-7 zokuKhumbula xa uziva wophukile ngaphakathi
Izibonelelo zeSauna: Iindlela ezi-8 ezikwenza ube seMpilweni kwaye wonwabe
9 Izinto Ofanele Uzazi Ngothando Xa Usemncinci
Izinto ezili-10 ezimangalisayo kuphela zizibini ezisebenza kunye ziya kuqonda
Uyisusa njani intloko ebuhlungu ngaphandle kwamayeza
Imac Ukhuselo Lokusingqongileyo 2 Indlela Emfutshane Yetekhnoloji Unxibelelwano Lonwabo Iteknoloji
Copyright ©2022 | digital-revolution.at | Umthetho Wabucala